Ungasifaka njani isatifikethi sedigital kwifowuni ye-Android | I-Androidsis
UMiguel Hernandez | 07/04/2021 08:39 | Tutorials
Isatifikethi seDijithali Ibe yenye yezona software zaziwayo kunye nezokhuseleko kumaxesha akutshanje, kwaye kubaluleke kakhulu ukuba sikwazi ukwenza iinkqubo ezininzi zazo zonke iintlobo ngezixhobo zethu eziphathwayo ngaphandle kwesidingo sokujongana naluphi na uhlobo lolawulo lukarhulumente.
Ke ngoko, kunomdla ngakumbi ekubeni sikwazi ukufaka iSatifikethi seDijithali nakwifowuni yethu. Sikubonisa ukuba ungasifaka njani iSatifikethi sedijithali kwifowuni yakho ye-Android ngendlela elula, kwaye ngenxa yoko unokuqhuba iinkqubo ezininzi ngendlela ekhawulezayo nekhuselekileyo.
1 Yintoni iSiqinisekiso seDijithali?
2 Fumana iSatifikethi seDijithali kwi-Android
3 Fumana kwi-PC kwaye ufake kwi-Android
4 Sebenzisa i-DNIe kwi-Android
Yintoni iSiqinisekiso seDijithali?
Ukuze ukwazi ukusebenza ngale teknoloji inomdla, ungaphantsi kobokuqala Masikucacise ukuba loluphi uhlobo lwesoftware esisebenza nayo. Uvile amaxesha amaninzi ngeSatifikethi seDijithali, enyanisweni uninzi lweewebhusayithi zolawulo lukarhulumente, nokuba yeyasekhaya okanye zikarhulumente, zikunika ithuba lokusebenzisa le ndlela yokuchonga ukuze ukwazi ukwenza iinkqubo ngombane. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba awazi ukuba bathetha ngantoni, yiyo loo nto silapha namhlanje, ukukufundisa ukuba sithini isiqinisekiso seDijithali.
Isatifikethi sedijithali se-FNMT (iMali yeSizwe kunye neFampu yeZitampu) Yindlela yokuzichaza nakweliphi na iphepha lewebhu ngendlela ekhuselekileyo. Ngokucacileyo, ayenzelwanga ukungena kwiakhawunti yakho ye-Instagram, kodwa xa le webhusayithi inolwazi olunomdla ngakumbi kubucala bomsebenzisi, njengoNondyebo, iDGT okanye iBhunga lesiXeko elisemsebenzini. Ngokusisiseko kufana nokuchongwa kwethu kwidijithali, njenge-DNI yethu ngohlobo lwesoftware. Ngamafutshane, kukuchongwa okupheleleyo komntu wakho ngokwamanani, njengoko isazisi sakho sinokuba njalo xa unomdla wokuzazisa endaweni ethile. Oku kuyamangalisa ukukwazi ukuhlengahlengisa iinkqubo zethu zazo zonke iintlobo.
Fumana iSatifikethi seDijithali kwi-Android
Sinethuba lokufumana iSatifikethi seDijithali ngokuthe ngqo ngesixhobo se-Android, into eza kukhawulezisa kakhulu iinkqubo. Kude kube kutshanje bekunokwenzeka kuphela ukuba kufumaneke iSatifikethi seDijithali ngee-PC kunye neemeko ezinzima ezenze ukuba abasebenzisi abaninzi baphele bayeke ukuzama. Nangona kunjalo, kuyamangalisa ukuba kulula kangakanani ukufumana iSatifikethi seDijithali ngokuthe ngqo kwi-Android sisebenzisa inkqubo eyenziwe yiNational Currency kunye neStamp Factory, kuba oku kufuneka sikhuphele esi sicelo silandelayo:
Isicelo se-Android: Ukufumana iSatifikethi seFNMT
Nje ukuba singene kwisicelo, siya kusinika kuphela iindlela ezimbini onokukhetha kuzo: Isicelo / Izicelo ezilindelweyo. Kule meko, into esiza kuyenza yile ilandelayo:
Sifumana iziQinisekiso zeMvelaphi kwi-FNMT kwaye sizifaka kwifayile yethu ye- I-Android ngokuyikhuphela kwiVenkile yeGoogle Play.
Sivula isicelo ukuze sifumane isatifikethi kwiFNMT
Cofa kwiqhosha «Isicelo»
Sigcwalisa idatha ehambelana ne-DNI okanye i-NIE yethu, ifani yethu yokuqala kunye ne-imeyile esiza kuyidinga kamva.
Sikhetha iofisi yobhaliso egunyazisiweyo ukungqina ubuqu bethu kwaye siya kuhamba ne-DNI yethu kunye nekhowudi abasithumele yona kwi-DNI.
Nje ukuba ubungqina bethu bungqinwe, sibuyela kwisicelo kwaye ucofe ku "Izicelo ezisalindelweyo"
Ngoku sinokukhuphela iSatifikethi seDijithali ngendlela ekhawulezayo
Njengoko ubona, Kubalulekile kuzo zonke iimeko ukuba uzichaze emntwini nge-DNI yakho okanye i-NIE yakho ukugunyazisa ukhuphelo, unokufumana imephu yokunxibelelana yeeofisi apho ungangqina khona ukuba ungubani na kwiSatifikethi seDijithali kwimaphu yeofisi.
Umsebenzi awupheleli apha, ukuqhubeka nokufaka iSatifikethi sakho seDigital ngala manyathelo alandelayo:
Khuphela kwikhonkco lesicelo esithethe ngalo ngaphambili
Cofa ku yamkela kwaye "Izicelo kunye neVPN"
Iya kufakwa ngokukhawuleza nangokulula
Sincoma ukuba ufake isatifikethi kwingcambu yesixhobo se-Android okanye kwimemori khadi ye-SD, ukusukela oko Izatifikethi ezifunyenwe kwi-Android azinakuthunyelwa kwelinye ilizwe, zisuswe kuphela kwaye zingeniswe, ngenxa yoko asizukukwazi ukuzisebenzisa kwezinye izixhobo.
Fumana kwi-PC kwaye ufake kwi-Android
Ngokucacileyo, sinokuzikhuphelela iSatifikethi seDijithali se-FNMT soMntu weNdalo ngqo kwi-PC kwaye sisifake kamva kwisixhobo sethu se-Android, enyanisweni kubonakala kum yeyona ndlela inomdla wokuba neekopi ezininzi zokulondoloza zihlala zikhona kwaye ke siqiniseke ukuba asilahli esi siqinisekiso sibalulekileyo. Into yokuqala kukwazi ukuba yintoni i- Izikhangeli ezihambelanayo ukufumana iSatifikethi seDijithali seFNMT kwiWindows PC:
Nangona kunjalo, oku kuya kufuneka kuqala sifake izatifikethi zeengcambu ze-FNMT ngqo kwi-PC yethu, kunye nezinye iifayile eziyimfuneko kulo msebenzi. I-FNMT yenze ifayile ye Isilungelelanisi se-FNMT oya kuwenza lula umsebenzi kuthi, kwaye eyenzayo kukufaka yonke into esiyifunayo ngokukhawuleza nangokuzenzekelayo.
Khuphela isakhelo seSitifiketi seDijithali seFNMT
Nje ukuba siyikhuphele kwaye siyifake yonke into eyimfuneko ukufaka iSitifiketi seDijithali kwi-PC esiyikhethileyo, siya kuqhubeka ngala manyathelo alandelayo:
Singena kwiwebhu ukucela isatifikethi sedigital.
Sazisa nge-DNI okanye i-NIE yethu
Sifaka ifani yethu yokuqala njengoko ibonakala kwi-DNI okanye kwi-NIE
Sifaka i-imeyile kwaye siyilungiselela apha ngezantsi
Ngoku sicinezela iqhosha «Thumela isicelo»
Nje ukuba sithumele isicelo, ikhowudi yesicelo iya kwenziwa kwaye siya kube sele siwenzile amanyathelo okuqala okufumana iSatifikethi seDijithali. Inyathelo elilandelayo kukuba uzichaza ngokwakho kwi-DNI yakho okanye kwi-NIE yakho Ukugunyazisa ukhuphelo, unokufumana imephu esemthethweni yeeofisi apho ungangqina khona ukuba ungubani na kwiSatifikethi seDijithali kule mephu yonxibelelwano yeofisi.
Ekugqibeleni uye waya kwifayile ye- Khuphela iwebhusayithi yeSatifikethi seFNMT Apho ukuba uqinisekisile ngokuchanekileyo isazisi sakho kwezi ofisi zikhankanyiweyo, uya kuba nakho ukukhuphela isiqinisekiso ngokufaka i-DNI yakho okanye i-NIE, ifani yokuqala kunye nekhowudi yesicelo abathumele yona nge-imeyile.
Ngoku lixesha lokuba ufake iSatifikethi seDigital, kwi-Android xa siyifumene ngePC. Ngale nto siza kuya kwicandelo le- «Ulawulo lweSatifikethi» kwicandelo «loKhuseleko» kwisikhangeli sewebhu esisisebenzisileyo ukukhuphela isiQinisekiso seDijithali. Emva koko siza kucofa ukhetho «Ukuthunyelwa kweSatifikethi kumazwe angaphandle ngesitshixo sangasese». Kule nyathelo kuya kusivumela ukuba sinike iphasiwedi kwisatifikethi sedijithali kwifomathi ye-PFX, Ukuba uyikhuphele kwifomathi yeCER, uya kuyenza ngokungachanekanga kwaye sicebisa ukuba ubuyele ekuqaleni.
Ukuyifaka kwisixhobo sethu se-Android Kufuneka nje usithumelele loo fayile yePFX esiyikhuphele kulo naluphi na uhlobo lweqonga. Ndicebisa ukuba uyigcine kuGoogle Drayivu ukuze uhlale unogcino, kodwa ungayithumela kwisixhobo sakho se-Android nge-imeyile okanye ngeTelegram, nje ukuba uyicinezele, landela la manyathelo alandelayo:
Cofa uze ukhuphele ifayile yePFX
Kwaye kulula ukuba usifumene isiQinisekiso seDijithali ngePC yakho kwaye ukwazile ukuthumela ngaphandle ukuze sibe nokufumaneka kwi-Android naphina apho ufuna khona. Le nkqubo ayinakwenziwa umva, kuba Izatifikethi ezifunyenwe kwi-Android azinakuthunyelwa kwelinye ilizwe, zisuswe kuphela kwaye zingeniswe, ngenxa yoko asizukukwazi ukuzisebenzisa kwezinye izixhobo.
Sebenzisa i-DNIe kwi-Android
Nangona isiQinisekiso seDijithali sesona siluncedo, Ukuphuma enkathazweni singasebenzisa isifundi se-NFC yesixhobo se-Android ukuzichonga kwi-DNIe. Ukwenza oku, into yokuqala ekufuneka siyenzile kukukhuphela usetyenziso oluhambelanayo:
Ukufikelela kwesicelo nge-DNIe ye-Android.
Ngoku kufuneka siqiniseke ukuba sinegama eligqithisiweyo abasinika lona xa sifumana i-DNI ngelo xesha, kwaye senza la manyathelo alandelayo:
Vula usetyenziso kwaye ukhethe apho ufuna ukungena khona
Khetha injongo yesazisi
Zichonge nge-DNIe yakho
Faka i-PIN yokufikelela oyinikwe kwisikhululo samapolisa xa wawusenza i-DNIe yakho
Ngoku uya kufikelela ngokuzenzekelayo kwinkonzo oyikhethileyo ngokukhawuleza nangendlela elula, ukuze uchongwe ngokupheleleyo nge-ID yakho. Ngelishwa, akukho zolawulo zininzi ezihambelana ngokupheleleyo ne-DNIe ngalo mzuzu, nangona ngokuqinisekileyo baya kukhula kungekudala banikwe iimfuno zabasebenzisi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungasifaka njani isatifikethi sedigital kwifowuni ye-Android